ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain(24 များအတွက်စုစုပေါင်း ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain ထုတ်ကုန်များ)
ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain များထဲမှ Changchun BCHT Biotechnology Co. ။
ရေကျောက် attenuation များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
tag ကို: ရေကျောက်ဘိုင်အိုဆေးဝါး gelatin အခမဲ့ , ရေကျောက်ဘိုင်အိုဆေးဝါးတိုက်ရိုက် , ရေကျောက် gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်
ကလေးများအပါအဝင်လူတိုင်းအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဒုတိယဆေးများ, များအတွက်အကြံပြုချက်များပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ ACIP ကလေးများအားလုံးပုံမှန်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး2ကြိမ်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအကြံပြုသည်။ ပထမဦးဆုံးထိုး6နှစ်ကတဆင့် 15 လနှင့်အသက် 4...
ရေကျောက် Lyophilized များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
tag ကို: gelatin အခမဲ့အမြင့် Titer အမြင့်အာနိသင် , gelatin အခမဲ့အမြင့် Titer ကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး , gelatin အခမဲ့အမြင့်အာနိသင်ကောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်အမှတ်တမဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ zoster ကာကွယ်ဆေး (Zostavax, Merck) ထက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိလျှင်အဘယ်သို့ပြုသင့်သင့်သလဲ...
tag ကို: gelatin အခမဲ့ Long ကသက်တမ်းအမြင့် Titer , gelatin အခမဲ့ Long ကသက်တမ်းအမြင့်အာနိသင် , gelatin အခမဲ့ Long ကသက်တမ်းကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ရေကျောက် Lyophilized attenuation များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk
tag ကို: ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက်ဆေးပညာကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက်ကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး , ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက်ဆေးဝါးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
သူတို့နိုင်ငံတကာမှာခရီးသွားလာလျှင် ACIP အသက်အရွယ် 1 နှစ်မတိုင်မီမွေးကင်းစမှရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကိုပေးခြင်းအကြံပြုပါသလား? အမှတ် ACIP ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားမတိုင်မီ 11 လမှတဆင့်မွေးကင်းစအရွယ်မှ6MMR တစ်ထိုးပေးခြင်း,...
ရေကျောက်တိုက်ရိုက် Lyophilized များအတွက် PFS ကာကွယ်ဆေး
tag ကို: ကာကွယ်ဆေး attenuation ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ဇီဝနည်းပညာကာကွယ်ဆေးထိုးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ဇီဝနည်းပညာ Bioproducts ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
အဘယ်အရာကိုရေကျောက်ထိတွေ့နှင့်ပြင်းထန်သောရောဂါနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအဘို့အမြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာသူကိုယ်ခံစွမ်းအား၏သက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲလူနာကာကွယ်ပေးရန်ပွုနိုငျသနညျး ဒီလိုလူနာရေကျောက် zoster ကိုယ်ခံစွမ်းအား globulin (VZIG)...
ရေကျောက် attenuation များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk
tag ကို: ကာကွယ်ဆေးဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ကာကွယ်ဆေးထုတ်ကုန်များကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ကာကွယ်ဆေးအမြင့် Titer ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
ရေကျောက် Lyophilized များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk
tag ကို: gelatin အခမဲ့ Semifinished ထုတ်ကုန်များကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနထေိုငျ , ကာကွယ်ဆေးရေကျောက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
အဘယ်ကြောင့်ပြည်သူ့တစ်ဦးရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးလိုအပ်သလား? ရေကျောက်အများစုဟာရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတော်လေးပျော့ဖြစ်ကြပြီးငါးမှ 10 ရက်အတွင်း၎င်းတို့၏သင်တန်းကို run ။ ဒါပေမယ့်လူမျိုး၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ပင်အသက်အန္တရာယ်အလွန်လေးနက်စေနိုင်ပါတယ်။...
tag ကို: ကြိုတင်ကာကွယ်မှု gelatin အခမဲ့အမြင့်အာနိသင် , ကြိုတင်ကာကွယ်မှု gelatin အခမဲ့ကနျြးမာရေး , ဆေးပညာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနထေိုငျ
အဆိုပါရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာဘာလဲ အဆိုပါရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးရေကျောက်ဖမ်းထံမှကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိသူကိုနီးပါးမည်သူမဆိုကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ရိုက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကျောက်ပု varicella- ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ဒါဟာအစ, အရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကိုခေါ်မယ့် zoster virus ကို ။...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation တိုက်ရိုက်၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
tag ကို: ဘိုင်အိုဆေးဝါး Lyophilized ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , gelatin အခမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , gelatin အခမဲ့ Bioproducts ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
အဘယ်သူသည်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးလိုအပ်တာလဲ နှစ်အောက်ကလေးများ 13 နှစ်နှစ်ခုဆေးများ get သင့်တယ် 15 လမှတဆင့်အသက် 12 မှာပထမဦးစွာထိုး6နှစ်ကတဆင့်အသက်အရွယ်4စက္ကန့်ထိုး ကအနည်းဆုံး 3...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized တိုက်ရိုက်၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
tag ကို: ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ဘိုင်အိုဆေးဝါးဇီဝနည်းပညာကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဘိုင်အိုဆေးဝါး Long ကသက်တမ်းကာလ
အဆိုပါရေကျောက် zoster ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ attenuation ရေကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ Oka / Merck strain ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကနဦး,...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation ၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
tag ကို: Bioproducts ဆေးဝါးအသက်ရှင်နေထိုင် , အမြင့်အာနိသင်ဆေးပညာနထေိုငျ , ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆေးဝါးအသက်ရှင်နေထိုင်
ကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိသူကိုသားသမီးများ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5% အဖျားသို့မဟုတ်အဖုဖွံ့ဖြိုး။ ကာလ 1995 ဘို့ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုအစီရင်ခံစာများ 2005 မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 55,7 သန်းဆေးများကာကွယ်ဆေး-related ရေကျောက်၏ delivered.Cases...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized ၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
tag ကို: ဇီဝနည်းပညာရေကျောက်နထေိုငျ , Long ကသက်တမ်းကာလအမြင့် Titer နထေိုငျ , Lyophilized ကာကွယ်ဆေးထိုးကျရှငျနထေို
လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအလွန်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ 1998 ကနေ 2013 ခုနှစ်, တစ်ဦးတည်းသာရောဂါကာကွယ်ဆေး-related သေခြင်းတရားအစီရင်ခံခဲ့သည်: Pre-တည်ရှိသွေးကင်ဆာနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်ကလေးသည်။ အချို့သောအခါသမယမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံခဲ့ကြ...
tag ကို: gelatin အခမဲ့ attenuation ကာကွယ်ဆေးထိုး , ကာကွယ်ဆေးဇီဝဗေဒကုန်ပစ္စည်းများတိုက်ရိုက်လွှင့် , ဇီဝနည်းပညာပြီးဆုံးကုန်ပစ္စည်းများတိုက်ရိုက်လွှင့်
အဆိုပါရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကိုအပြင်းအထန်နေမကောင်းလူများ, များအတွက်အကြံပြုသည်မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ , အတိတ်ထဲမှာရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတစ်အလေးအနက်မတည့်တုံ့ပြန်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူတွေကိုမှမတည့်တဲ့သူကလူ gelatin မှမတည့်ကလူ neomycin...
ရေကျောက် attenuation များအတွက် PFS ကာကွယ်ဆေး
tag ကို: gelatin အခမဲ့ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်ကာကွယ်ဆေးထိုး , gelatin အခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းများဆေးပညာ Finished , gelatin အခမဲ့အမြင့် Titer ကနျြးမာရေး
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အသက် 12 မှ 18 လအတွင်းမှာပေးထားတဲ့ကနဦးဆေးထိုးနှင့်အတူတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကြိမ်အကြံပြုသည်။ ပေးထားသောအနည်းဆုံးသုံးလ later.This ကာကွယ်ဆေးပေါ်ပေါက်လျှင်ဒုတိယထိုး (အရေပြားအောက်မှာ)...
တိုက်ရိုက် Attenuated ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
tag ကို: ဘိုင်အိုဆေးဝါး Lyophilized ဆေးဝါး , ဘိုင်အိုဆေးဝါး Lyophilized အမြင့်အာနိသင် , gelatin အခမဲ့ရေကျောက် Bioproducts
ရေယုန် zoster (အခါရေယုံ) အများဆုံးမကြာခဏသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဖြစ်ပေါ်သာခဲကလေးများတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးလူကြီးများအတွက်ရေယုန် zoster ၏ဖြစ်ပွားမှု 0.9 / 1000 လူတစ်ဦးနှစ်ဖြစ်ပြီး, 0.33 / 1000...
tag ကို: ဘိုင်အိုဆေးဝါး Long ကသက်တမ်းဇီဝဗေဒ , ဘိုင်အိုဆေးဝါး Long ကသက်တမ်းပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ , ဘိုင်အိုဆေးဝါး Lyophilized ကာကွယ်ဆေးထိုး
(ဂျပန်နှင့်ကိုရီးယားအတွက် 1988 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိ) သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် 1995 ခုနှစ်တွင်ကာကွယ်ဆေး၏နိဒါန်းမတိုင်မီက, United States မှာတစ်နှစ်လျှင်တစ်ဝှမ်း 4.000.000 အမှုပေါင်းအများစုကလေးငယ်များပုံမှန်အား 10,500-13,000 ဆေးရုံတွေမှာလူနာရောက်ရှိမှု...
tag ကို: ဘိုင်အိုဆေးဝါးနောက်ဆုံးအစုလိုက်အမြင့် Titer , ဘိုင်အိုဆေးဝါးနောက်ဆုံးအစုလိုက် Attenuated , ဘိုင်အိုဆေးဝါး Long ကသက်တမ်းကာလရေကျောက်
တချို့ကကာကွယ်ဆေးထိုးကလေးများငါးခုမှရှစ်နှစ်ပေါင်းသကဲ့သို့နည်းနည်း၎င်းတို့၏အကာအကွယ် antibody ကိုဆုံးရှုံးဖို့တွေ့ပါပြီ။ သို့သော်အညီ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ : "ဂျပန်တွင်အထိ 20 နှစ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 10...
tag ကို: ဘိုင်အိုဆေးဝါးကာကွယ်ဆေးအမြင့် Titer , ဘိုင်အိုဆေးဝါးကာကွယ်ဆေး attenuation , ဘိုင်အိုဆေးဝါးပြီးဆုံးကုန်ပစ္စည်းများရေကျောက်
tag ကို: ရေကျောက် Long ကသက်တမ်းကာလဆေးဝါး , ကြိုတင်ကာကွယ်မှုရေကျောက် Lyophilized , ဘိုင်အိုဆေးဝါးကာကွယ်ဆေးပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကို 70%% မှ 90 ရေကျောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောရေကျောက်တားဆီးဘို့ထက်ပို 95% ထိရောက်ဘို့ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ Follow-up, အကဲဖြတ်မှာအနည်းဆုံး 11...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation Lyophilized တိုက်ရိုက်၏ bulk
tag ကို: ရေကျောက်နောက်ဆုံးအစုလိုက်ကနျြးမာရေး , ရေကျောက် Long ကသက်တမ်းကာလဆေးပညာ , ရေကျောက် Long ကသက်တမ်းကာလကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
မိုင်းနားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆေးထိုး၏ site မှာနာကျင်မှု, ဖျားနာခြင်း, အဖုပါဝင်နိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှားပါးဖြစ်ကြပြီးသူတို့အတွက်အများအားဖြင့်ပေါ်ပေါက် ဆင်းရဲသားကိုကိုယ်ခံစွမ်းအား function ကို ။ နှင့်အတူလူအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို HIV /...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation Lyophilized ၏ bulk
tag ကို: ရေကျောက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် Bioproducts , ရေကျောက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် Semifinished ထုတ်ကုန်များ , ရေကျောက်နောက်ဆုံးအစုလိုက်အမြင့်အာနိသင်
ဒါ့အပြင်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအဖြစ်လူသိများရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကာကွယ်ဆေး ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်ကြောင်း ရေကျောက် ။ ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုမှာထိုးအလယ်အလတ်ရောဂါ 95% နှင့်ပြင်းထန်သောရောဂါ 100% ကာကွယ်ပေးသည်။...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် attenuation ၏ bulk
tag ကို: ရေကျောက်ဇီဝနည်းပညာမြင့်မားသော Titer , ရေကျောက်ဇီဝနည်းပညာ attenuation , ရေကျောက်နောက်ဆုံးအစုလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုး
hasn`t ရေကျောက်ခဲ့ဒါမှမဟုတ်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကိုဆည်းပူးသူမည်သူမဆိုရောဂါရနိုင်သည်။ ရေကျောက်နာမကျန်းများသောအားဖြင့်5to7 ရက်ပေါင်းကြာရှည်ခံသည်။ ရေကျောက်၏ဂန္လက္ခဏာနောက်ဆုံးမှာအနာဖေးသို့လှန်သောယားယံ, အရည်-ဖြည့်အရည်ကြည်ဖုသို့လှည့်တဲ့အဖုဖြစ်ပါတယ်။...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Lyophilized ၏ bulk
tag ကို: ရေကျောက်ဇီဝနည်းပညာရေကျောက် , ရေကျောက်ဇီဝနည်းပညာဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များ , ရေကျောက်ဇီဝနည်းပညာပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
CDC ကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ခုဆေးများအကြံပြုသည်။ ကလေးများဟောင်း6နှစ်ကတဆင့်ကာကွယ်ဆေး-12 အသက် 15 မှတဆင့်လအရွယ်နဲ့4မှာတစ်စက္ကန့်ထိုးမှာပထမဦးဆုံးထိုးနှစ်ခုဆေးများခံယူသင့်ပါတယ်။ ရေကျောက်ဟာရေကျောက်-zoster...
ရေကျောက် attenuation များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက် Lyophilized attenuation များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်တိုက်ရိုက် Lyophilized များအတွက် PFS ကာကွယ်ဆေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက် attenuation များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက် Lyophilized များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်တိုက်ရိုက်များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တိုက်ရိုက် Attenuated ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးပြီးဆုံးကုန်ပစ္စည်းများတိုက်ရိုက် Lyophilized အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Attenuated ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးပြီးဆုံးကုန်ပစ္စည်းများ Lyophilized အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation Lyophilized တိုက်ရိုက်၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation Lyophilized ၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် attenuation ၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Lyophilized ၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain from China, Need to find cheap ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our ရေကျောက် Zoster Virus ကို Oka Strain, We'll reply you in fastest.